Madaxweynihii hore Sheekh Shariif Sh. Axmed oo la Guddoonsiinayo 5 Milyan Dollar – idalenews.com
Madaxwaynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sh. Axmed ayaa ku biiray Todobado Hoggaamiye oo Afrikaan ah, kuwaasoo si nabadgelyo leh u ogolaaday guuldarada doorashooyin ee ka dhacay dalalkii ay hoggaaminayeen, kuwaasi oo madaxtinimadooda kadib waxbarasho ka bilaabay Jaamacadda Boston ee dalka Mareykanka.
Sheekh Shariif Sh. Axmed oo ka mid noqday Hoggaamiyeyaal Afrikaaan ah oo ogolaaday guuldaradii doorasho ee Soomaaliya ayaa casuumaad ka helay maamulka jaamacadda Boston si uu waxbarashadiisa horay u sii wado, wuxuuna Madaxweyne Shariif uu u guuray Kursigii Waxbarashada.
Madaxweyne Shariif oo xukunka kula wareegay awoodda hubka, kadibna wuxuu ogolaaday in uu u gogol dhigo kooxihii falaagooyinka ee kasoo horjeeday dowladnimada, nasiib daro kooxahaasi kama aysan aqbalin.
TV-ga Alcarabiya ayaa barnaamij uu ka diyaariyay Madaxweynihii hore ee dalka Shariif wuxuu ku macneeyay Madaxweyne Soomaaliya u horseeday mudo 21 sano ah kadib xukunka dhexe, oo qaarada Afrika looga baran.
Visiting president oo ah barnaamijka deegaan siinta madaxda machadka cilmi baarista ee keydka Madaxweyneyaasha Afrika ee Jaamacadda Boston ayaa waxaa kaga horeeyay Sheekh Shariif Madaxwaynihii hore ee Zaambiya Kenneth Kaunda kadib markii xilka Madaxwaynanimada dalkaas uu haayay muddo 30 sano ku dhawaad ah, sidoo kalena waxaa ku biiray barnaamijkaas Madaxwaynaha Zazibaar Amaanii Cabiid, iyo Madaxwaynaha Dalka Butuswaana Fitistaay Mugaaya.
Barnaamijkan ayaa ujeedada laga leeyahay waxay tahay in ay u arkaan dadka ku Jira Barnaamijka Deegaansiinta Madaxda ee Jaamacadda Boston xal soo jiidasho sidii loogu qancin lahaa Madax badan oo xilka si kaligii taliya ah u haysta una ogalaan lahaayeen Dimuquraadiyadda.